PET Kugadzikana Mukombe Vagadziri - China PET Kunatsovira Mukombe Fekitori & Vatengesi
3oz PET Mapepa epurasitiki ane Lids
Izvi 3oz PET Makapu epurasitiki ane Lids sarudzo yakanaka yemasampuli, macondiments, uye zvikamu zvemumativi. Kunyangwe iwe uchirega vatengi vako vaedze doro nyowani kana iwe uri kuendesa maseturu masampuli pane yekutengesa show, iyi makapu akakosha ekuunza vanhu kune zvavanofarira uye maitiro echiratidzo chako.
Yakakwana for condiments, muto, zvinwiwa uye masampuli, aya 3oz PET Makapu epurasitiki ane Lids zvinogadzirwa nezvinhu zvakashandiswazve. PET zvinhu ndizvo chete zvakasvibirira izvi zvinonaka makapu. Iwo akajeka sekristaro uye anogona kuve 100% akagadziriswazve kushandiswa kwechipiri.
Nyora izvi 3oz PET Makapu epurasitiki ane Lids, rako bhizinesi zita kana logo yechinhu chisingakanganwiki chiratidzo chiratidzo inzira yakanaka yekushambadzira. Kudhindisa logo ndiyo nzira yakanaka yekusimudzira zvigadzirwa zvako uye kurega vanhu vazhinji vachiziva chako. Isu tinopa yakasarudzika kudhinda uye pamasikiro. Muizvikesi, kubatsira bhizinesi rako kuchengetedza nzvimbo uye kuwana izvo zvaunoda kuti zvishande zvinobudirira.